Nepal: Maoista Nitarika Fitokonana Nampihitsoka Ny Firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2017 5:08 GMT
[Amin'ny fiteny anglisy avokoa ny rohy rehetra ato raha tsy misy fanambarana mifanohitra ]
Ny 1 may, andro iraisam-pirenena ho an'ny asa, dia nandefa antso avo hanao fitokonana faobe manerana ny firenena mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo maoista nepaley ho fitakiana ny fandravàna ny governemanta amperinasa sy hirosoana tanteraka amin'ny dingana fanoratana ny lalàm-panorenana [vaovao voaray farany : natsahatr'izy ireo ny hetsi-panoherana nataony, ny 8 may].
Fitokonana tao Nepal. Sary an'i Nepaliaashish, tao amin'ny Flickr, navoaka sy nampiasàna lisansa Creative Commons.
Nanambara i Deepak Adhikari, teratany nepaley bilaogera sady mpanoratra gazety, milaza ny tenany ho toy ny vahiny ao anatin'ilay bilaogy mitondra ny lohateny hoe LarryJhonsonOnline, fa vokatra mivantana nateraky ny fahakiviana tsy mitsaha-mitombo izay tsapan'ny vahoaka miaina ny zava-misy ankehitriny eo amin'ny firenena io hetsi-panoherana tarihan'ny maoista io, eny fa na ireo hetsika maro tany aloha aza. Mametra-panontaniana izy mikasika ny toky nomen'ny governemanta ny amin'ny hamitàna ara-potoana ny lalàm-panorenana, manontany tena ihany koa izy hoe mba miasa saina ho an'ny vahoaka lambda (vahoaka madinika) izay mijaly vokatry ny hetsi-panoherana ataony manerana ny firenena ve ireo Maoista?
Nandeha am-pilaminana ny fitokonana amin'ny ankapobeny, kanefa niteraka olana betsaka teo amin'ny vahoaka ny fanakatonana ny trano fivarotana, ny banky, ny sekoly ary ny fitateram-bahoaka. Araka ny hita ato amin'ity horonantsary ity izay navoaka tao amin'ny bilaogy Ndao hiray hina hanoratra Bilaogy ho an'i Nepal Demokratika’
Notantarain'i Shreedeep Rayamajhi tao anatin'ny bilaogy GroundReport hoe nihanatahotra andro aman'alina ny mponina raha niditra tamin'ny andro faha 5 io hetsi-panoherana natao io satria nihafoana avokoa ireo vokatra fototra tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro.
Mazava ho azy fa nandeha am-pilaminana ny fitokonana fa mbola mitoetra foana ny olana eo amin'ny fanjavonana, sy ny tsy fahampian'ny loharanon-karena, azo lazaina hoe nisintaka nanaisotra ny fanohanany azy ny mpanohana ireo maoista. Toy izany koa, maro amin'ireo mpanohana ny maoista no marary araka ny henonay, ary an-jatony ireo mpanao hetsi-panoherana no niala an-daharana tamin'io hetsika fitokonana io ka niverina nody tany an-tranony handinika ny tsy fetezan'ny toedraharaha.
Mihamitombo ny hatezeran'ny vahoaka amin'ny governemanta. Mametra-panontaniana momba ny fahombiazana sy ny tanjon'io hetsika tarihan'ny maoista io ilay bilaogera Murchunga tao amin'ny Youtube.
Ho lasa Minisitry ny governemanta ao aoriana ao ireo lehibe mpitarika an'io hetsi-panoherana io… Hanao izay hampanankarena azy fotsiny ao anatin'ny fitiavan-tena izy ireo. Ary mbola hiverina indray izao trangan-javatra izao rehefa hidina an-dalam-be hitokona ireo mpitondra fanjakàna ankehitriny ireo. Mandritra izany fotoana izany, miverina mamonjy ny trano fonenany ireo vahoaka ireo ka mbola hiaina indray ny zavatra toy izao .
Namoaka rakitsary sy horonantsary maneho ireo hetsi-panoherana nokarakarain'ny vahoaka maoista manerana ny renivohitr'i Katmandou i Umesh Shrestha tao amin'ny MySansar, bilaogy iray amin'ny fiteny nepaley. Asehon’ ilay rakitsary ny paikadin'ny maoista tamin'io fanoheram-panjakàna izay manao fitaovana ny ankizy io. Fikambanana maro samihafa miaro ny zon'ny ankizy no efa nandrara ny maoista tsy hampiasa ny ankizy ho fitaovana amin'ny raharaha politika ataony fa hatreto aloha dia tsy mbola nohenoin'izy ireo izany..
Ireo ankizy izay natao takalon'aina tamin'io hetsika io, dia tsy vitan'ny hoe nataon'ny maoista fitaovana fotsiny ihany mba hahatratrarany ny tanjony eo amin'ny sehatra politika, fa tsy afaka mandeha mankany an-tsekoly ihany koa. Sekoly mihoatra ny 800 no nakatona manerana ny firenena.
Nijaly noho ireo hetsi-panoherana ireo ihany koa ny Fizahantany, izay andry iankinan'ny toekaren'i Nepal. Nasaina niala an'i Katmandou ireo mpizahatany. Mitantara momba ireo namany izay tsy afa-mihetsika ao Nepal vokatr'ireo hetsi-panoherana ireo tao amin'ny PaintDifferent , izay bilaogy noforonina artista miisa roa ambinin'ny folo, ilay bilaogera Megan.
Nanomboka nampiditra ireo mpizahatany tao anaty fiara iombonana arahan'ny mpitandro filaminana avy ato aoriana ny manampahefana nepaley omaly. Nampalaelo anefa fa tsy tafaraka tamin'ireo i Rob sy Paul ka mbola tsy afa-mihetsika teo amin'ny toerana nisy azy. Misokatra foana ny toeram-piantsonan'ny fiaramanidina, fa mbola misy eo amin'ny 200 kilometatra amin'ny toerana misy azy ireo vao tonga any ary mikatona avokoa ny REHETRA ankoatran'io. Mazava ho azy fa te-ho tafody soa aman-tsara any amin'ny fireneny izy ireo ahafahany manomboka mamoaka ny sariny dieny mbola tsy miharatsy ny zava-miseho.
Miahiahy ny amin'ny vokatr'io hetsi-panoherana tarihan'ny maoista io eo amin'ny toekarena izay efa marisarisa ilay bilaogera Chandan Sapkota, izay mandray anjara amin'ny fandaharana « ny Varotra, ny Hitsiny ary ny Fampandrosoana » izay iandreketan'ny fikambanana Carnegie mba hisian”ny fahalemana manerana izao tontolo izao (Carnegie Endowment for International Peace, [Fr] fikambanana iraisam-pirenena mahaleo tena miaro ny tombontsoam-bahoaka ary mnanana ny foibeny any Washington. Namoaka ity fanehoankevitra manaraka ity izy tao amin'ny Twitter:
Simbain'ireo maoista ny toekarena. Toa mampiasa ny paikadin'i Tailandy sy Kirghizy eo amin'ny fanehoana ny fanoheram-panjakana ny hetsika karakarain-dry zareo.
Naharitra ela be ny adihevitra momba ny tanjon'io hetsi-panoherana tarihan'ny maoista io sy ny voka-dratsiny eo amin'ny sehatra politika ao Nepal. Nahatsapa mafy ny voka-dratsin'io fitokonana io ny Nepaley ary manantena hahita vahaolana mampilamina amin'io krizy miseho ankehitriny io izy ireo.